Ciidanka Xasilinta oo hawlgal ka fuliyay meel ka baxsan Magaalada Muqdisho | STAR FM SOMALIA
Home Wararka Ciidanka Xasilinta oo hawlgal ka fuliyay meel ka baxsan Magaalada Muqdisho
Ciidanka Xasilinta oo hawlgal ka fuliyay meel ka baxsan Magaalada Muqdisho
Ciidanka Xaasilinta Caasimadda, ayaa xalay hawlgal ka fuliyay meel ka baxsan Magaalada Muqdisho, waxayna noqoneysaa markii ugu horeysay oo ay gaaraan duleedyada magaalada.
Ciidanka oo wata gaadiidka dagaalka, ayaa waxaa lagu arkay Deegaanada Tabeellaha Sheekh Ibraahim, Garasbaaley, Siinka Dheer, Tareedisho illaa aagga Ceelasha Biyaha, halkaasoo ay ka sameeyen hawlgal ay dad badani ku soo qab qabteen.
Ciidanka, ayaa waxay gudaha u galeen guryo u muuqday in ay bartilmaameyd ahaayen, waxayna mid ka mid ahi guryahaasi ka helayn gaariga nin habeen kahor lagu dilay agagaarka Xerada Sarkuusta.
Ninkan oo lagu magacaabi jiray Cabdi Nuunow Aadan, ayaa wuxuu ka tirsanaa Ergadii Xildhibaanada ku soo dooratay Magaalada Baydhabo, waxaana xusid mudan in lagu dhex dilay gaarigiisii, oo markii dambena horey looga sii kaxeystay.
Dadka ku dhaqan deegaanadaasi, ayaa waxaa laga soo xigtay in Ciidanka Xasilinta ay dib xoriyadoodu u siiyeen inta badan dadkii ay hawlgalka ku soo qab qabteen, halka tiro yar-na ay ula dhaqaaqeen dhinaca Magaalada Muqdisho.
Faah faahin badan lagama hayo, haddii ciidanku ay gacanta ku soo dhigeen dableydii dishay Cabdi Nuurow Aadan iyo haddii kalaba, waxaase laga war dhawraya hay’adaha ammaanku in ay ka hadlaan hawlgalkaasi.
Magaalada Muqdisho oo lagu dilay toboneeyo ka mid ah Ergadii soo xushay Xildhibaanada Labada Aqal ee Baarlamaanka Somaliya, ayaa inta laga warqabo waxaan jirin cid weli dilalkaasi loo soo xiray.
Previous articleShir ka dhan ah Madaxweynaha Koofur Galbeed oo ka dhacay Muqdisho (Daawo Sawirro)
Next articleMunaasabadda Maalinta Calanka Soomaaliyeed oo xalay lagu qabtay Muqdisho(Daawo Sawiro)